Mudaharaad xukuumadda Spain lagaga soo horjeedo oo ka dhacay Barcelona - BBC News Somali
Mudaharaad xukuumadda Spain lagaga soo horjeedo oo ka dhacay Barcelona
Qaar ka mid ah shacabka gooni u goosadka ah ee Catalonia ayaa mudaharaad ka hor dhigay xarunta baarlamaanka gobolka ee magaalada Barcelona, ka dib markii garsoore maxkamad ku taal magaalo madaxda Madrid si ku meel gaadh ah ugu diray jeelka sideed wasiir oo ka mid ahaa xukuumadii maamul goboleedka Catalonia ee la kala diray.
Dadkii goobta ka hadlay waxay sheegeen in haatan ay xabsiga ku jiraan toban siyaasi oo reer Catalonia ahi, waxaanay intaa ku dareen in laba hogaamiye dhaqameed oo kalena bishii hore la xidhay.
Dadkii isku soo baxay ee mudaharaadka dhigayey waxay ku dhawaaqayeen Spain waa cambaar Yurub ku taal. Garsoore Carmen Lamela ayaa sheegtay in sababta ay sideeddaa siyaasi in la xidho u amartay ahayd in ay ka cabsi qabtay in ay dalka ka baxaan ama ay baabiiyaan cadaymaha ku lidka ah ee yaala xafiisyadoodii hore.
Dacwad oogayaashu waxay ku soo oogeen falal fallaagonimo ah iyo in ay isku dayeen in ay kala gooyaan dalka Spain. Hase yeeshee garsooruhu waxay dib u dhigtay dhegaysiga dacwad ay xeer ilaalintu u soo gudbisay oo ahayd in Spain Midowga Yurub ka dalbato inuu soo saarao waaran lagu soo qabanayo hogaamiyaha Catalonia ee xilkii laga xayuubiyey, Carles Puigdemont, iyo afar qof oo kale oo ay wada shaqayn jireen oo haatan jooga dalka Belgium.